गौरादहमा कृषि क्याम्पस स्थापना – Deshko News
Home » जिल्ला » गौरादहमा कृषि क्याम्पस स्थापना
झापा,२ वैशाख । झापाको गौरादहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको रुपमा कृषि क्याम्पस स्थापना भएको छ ।
गौरादह बहुमुखी क्याम्पस रहेको स्थानमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डा. केशवराज अधिकारीले आईतबार एक कार्यक्रमका बिच उदुघाटन गर्नु भएको छ । उद्घाटन गर्दै डा. अधिकारीले यस वर्ष ५० जना विद्यार्थीहरुले गौरादह कृषि क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने र ४ वर्षमा २०० जना विद्यार्थी रहने जानकारी दिनुभयो ।
३२ जना प्राध्यपक र करिव ९० जनासम्म कर्मचारी रहने बताउँदै उनीहरुको आवश्यकतामा सहजीरकण गर्न गौरादहबासीहरुले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस अवसरमा प्राध्यापक जन्मजय गैरेले कृषि क्याम्पस प्रमुखको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि रोजगारीको खोजीमा युवाहरु भौतारिरहेको अवस्थामा कृषि क्याम्पसले यस क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउनका साथै रोजगारीबाट युवाहरु बञ्चित नहुने अपेक्षा राखिएको छ ।
प्राविधिक शिक्षाको माग भईरहेको समयमा कृषिको उर्वर भूमि रहेको गौरादह क्षेत्रमा कृषि क्याम्पस स्थापना हुनु गौरवको विषय रहेकाले विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरी क्षमतावान विद्यार्थी उत्पादन गर्नु सबैको दायित्व रहेको गौरादह नगरपालिकाका मेयर रोहित कुमार साहले बताउनुभयो । गौरादहमा कृषि क्याम्पस सञ्चालन गर्न यस वर्ष यस नगरपालिकाले २० लाख रुपैयाँ विनियोजित गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।